Khabiirka Kala Duwan: Faa'iidooyinka Adeegyada Kaydinta Webka ee Calaamadaha
Maalmahan, ganacsiyada ma noolaan karaan iyada oo aan haysan xog wanaagsan. Waxay ka dhigan tahay inaad hesho xogta ku saabsan tartamayaasha, macaamiisha, badeecooyinka, adeegyada, dadka cusub iyo kuwa cusub. Xogta internetka ayaa saameyn ku leh, laakiin ganacsatada macaamiisha ah waxay u arkaan in ay adag tahay in la ururiyo, soo saaro, iyo dib u isticmaalo xogta. Iyadoo qalabyada saxda ah, si kastaba ha ahaatee, waa adag tahay in la helo macluumaad qiimo leh oo wax ku ool ah ganacsigaaga internetka.
Halkan waxaan ka wada hadalnay faa'iidooyinka shabakadda shabakada adeegyada internetka ama suuqyada warbaahinta bulshada.
1. Hubinta xogta saxda ah
Qalabka wax lagu akhristo ee internetka wuxuu ka caawiyaa xogta soo saarida qaabab la akhristo oo la iskudhin karo, ka caawinta ganacsatada macaamiisha ah inay fuliyaan tiro hawlo ah. Shirkadaha cilmi-baarista, shirkadaha, iyo shirkadaha suuq-geynta intooda badani waxay ururiyaan xogta si ay u qorsheeyaan, cilmibaaris iyo falanqeyn. Marka ay timaado suuq-geynta shabakada internetka, xajinta webka waa habka ugu fiican, lagu kalsoonaan karo loona aamini karo. Bixiyeyaasha internetka waxay u muuqdaan inay ururiyaan macluumaadka ku saabsan tartamahooda, isbedelada hadda jira, alaabta iyo adeegyada kala duwan. Waxay markaa u isticmaalaan macluumaadkan kor u qaadista, qiimeynta iyo ujeedada qaybinta. Natiijooyinka tayada sare waxaa lagu xaqiijin karaa oo kaliya markaad isticmaasho qalabka lagu kalsoon yahay, iyo xogtaada la soo saaray waa inay noqotaa qalad la'aan iyo la akhrisan karo.
2. Badbaadi wakhtiga iyo booska
Faa'iido kale oo xog ah ama adeega duubista bogga waa in ay badbaadiyaan labada waqtigeena iyo booskeena. Xawaaraha uu macluumaadka u heli karo suuqyada internetka ayaa wax ka beddeli kara. Haddii ay gacanta ku hayaan xogta haraaga ah, waxay qaadan kartaa waqti ku filan si loo helo natiijooyinka la rabay. Laakiin leh qalab sida soo dejinta. io iyo Kimono, waxay ku badbaadin karaan waqtigooda iyo tamarkooda oo waxay saacado ku qaadan karaan wax kale halkii ay ka tirtiri lahaayeen xogta. Sidaa daraadeed, waxaan dhihi karnaa in duullimaadyada webka ay dhab ahaantii u tahay khibrad ganacsi iyo maamulayaal.
3. Ka joogso tartan
Ka faa'iideysiga awoodda macluumaadka waa mid muhiim ah isbeddelka. Natiijooyinka la isku halleyn karo oo degdeg ah oo ku saabsan qiimaha iyo helitaanka alaabooyinka iyo adeegyada internetka ayaa qiimo weyn u leh goobaha e-ganacsiga, dukaamada onlineka, iyo ganacsatada internetka. Xitaa shirkadaha FMCG waxay jecel yihiin in ay ka tirtiraan xogta laga helo boggaga internetka ee kala duwan. Bixiyeyaasha internetka ayaa markaa isticmaala xogtan si ay u sii wataan tartan, ujeedooyin xayeysiineed iyo bartilmaameed tiro macaamiisha ah oo dhan adduunka oo dhan.
4. Maaree qiyaasaha
daqiiqad kasta, Webka World Wide Webku wuxuu soo saaraa quintillion bytes macluumaad. Xogta ganacsiga, macluumaadka warshadaha, xogta dadweynaha iyo macluumaadka warbaahinta bulshada waa noocyo yar oo aad u baahato ganacsigaaga. Nasiib wanaag, qalabka sida XPath waxay ka caawin kartaa in ay soo saaraan dhammaan xogta noocyada kala duwan ee shabakadaha kala duwan, iyo suuqyadda internetka waxay u adeegsadaan inay kor u qaadaan ganacsigooda iyo istaraatiijiyooyinka suuqgeynta. Waxay ku wareegi karaan malaayiin ka mid ah bogagga shabakadda.
5. Dhammaan macluumaadka hal meel
Ugu dambeyntii, laakiin ugu yaraan, adeegga shabakada adeegga ayaa fududeynaya in xogta oo dhan laga dhigo hal meel, u dhig qaabab la adeegsan karo iyo ka caawinta suuqgeynta internetka inay qabtaan hawlo kala duwan. Markaad rabto inaad wax ka qabato noocyada kala duwan ee macluumaadka webka, waxaad isticmaali kartaa qalabka sida soo dejinta. oo waxay ku kaydin kartaa hal database, kaydinta wakhti iyo tamar iyo kor u qaadida astaantaada ama sheygaada internetka si habboon. Quruxda adeegyada adeega shabakadda waa in ay yihiin kuwo la gaari karo oo ku habboon shuruudaha macmiilka Source .